﻿	မီးဖို Poach ကြက်ဥ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဝက်သားနှင့်ပဲနှင့်အတူ Cowboy ပဲ
မီးဖို Poach ကြက်ဥ
ဤအရာများသည်ထောပတ်သီးပေါင်မုန့်တီဗွီတွင်လုပ်ခြင်း၊ ဂန္ကြက်ဥ Benny သို့မဟုတ်တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်စျေးသိပ်မကြီးသည့်ပရိုတင်းကြွယ်ဝသောနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့ဘာသာသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသော Poached ကြက်ဥ
မီးဖို၌ကြက်ဥခိုးယူခြင်းလက် - ချွတ်နှင့်လုပ်ဖို့ရိုးရှင်းပါသည်။
၎င်းသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းကြက်ဥများစွာပြုလုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု (လူအုပ်ကြီးကိုအစာကျွေးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး) ။
မီးဖို၌ကြက်ဥ Poach နည်း
မီးဖို၌ poached ကြက်ဥလွယ်ကူသောရှုပ်ထွေးသောလမ်းလုပ်ပါ!
လူဖြူများကိုမသတ်မှတ်မီနှင့်အဝါရောင်သည် ၁၂-၁၅ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်လိုချင်သောအလှအပများကျန်ရှိနေသေးသည်အထိဥများကိုဖုတ်ပါ။
အလှအပအတွက်သူတို့ကိုစစ်ဆေး! သင်ဥများကိုမီးဖိုထဲမှဖယ်ရှားလိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည် uncooked ဖြစ်နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်ကြက်ဥအဖြူ၏ထိပ်တွင်ရေစီးကျဖွယ်ရှိသည်။
Air Fryer ဥ (ပြုတ်ကြက်ဥ)
ရေနွေးငွေ့ချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်ကြက်ဥများကို ၅ မိနစ်မှ ၇ မိနစ်အထိချက်ပြုတ်ပါ။ ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်ဥများပါသည့်သေတ္တာကို ၁၀ မိနစ်အေးအောင်ထားပါ။
သူတို့ overcook ကြဘူးသေချာစေရန်ကြက်ဥခိုးဖမ်းများအတွက် timer နေရာမှာထားပါ။
ကြက်ဥများကိုဒယ်အိုးထဲမှချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ (သို့) ဒယ်အိုးမှအပူသည်ကြက်ဥများကိုဆက်လက်ချက်ပြုတ်နေလိမ့်မည်။
သင်သည်ဤမီးဖို Poach ကြက်ဥလုပ်ခဲ့သလား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
ချက်ပြုတ်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၆ ဥ စာရေးသူHolly Nilsson မီးဖိုချောင်သုံးကြက်ဥများသည်လွယ်ကူ။ မအောင်မြင်သောအခါတိုင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထွက်လာသည်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
သင်သုံးနေသောခွက်တစ်ခုစီ၌ muffin ဗန်းတစ်ခုတွင်ရေဇွန်း ၁ ခွက်ကိုလောင်းပါ။
မီးဖို၌ထားပါနှင့် 12-15 မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်ကြက်ဥလူဖြူကိုသတ်မှတ်နှင့်အဝါရောင်နေဆဲပုပ်သည်တိုင်အောင်။
သူတို့ကိုဖယ်ရှားရန် slotted ဇွန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ spatula ကိုသုံးပါ။
သငျသညျမီးဖိုထဲကကြက်ဥကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, သူတို့က uncooked ခံရဖို့ပုံရသည် ။ ၎င်းသည်ကြက်ဥအဖြူ၏ထိပ်တွင်ရေစီးကျဖွယ်ရှိသည်။ သူတို့ overcook ကြဘူးသေချာစေရန်ကြက်ဥခိုးဖမ်းများအတွက် timer နေရာမှာထားပါ။ လူဖြူတွေဟာမီးဖိုထဲကနေထုတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ချက်ပြုတ်နေမှာပါ။ ကြက်ဥများကိုဒယ်အိုးထဲမှချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ (သို့) ဒယ်အိုးမှအပူသည်ကြက်ဥများကိုဆက်လက်ချက်ပြုတ်နေလိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံးအကောင်းဆုံးအဆိပ်သင့်ကြက်ဥများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးကြက်ဥများမည်သို့လုပ်ရမည်၊ မီးဖိုချောင်သုံးကြက်ဥများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးကြက်ဥစာရွက်များ သင်တန်းနံနက်စာ၊ သရေစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။